တို့ဗမာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသားတိုင်းပြည် ရဲ့အိမ်ကြက်ချင်း အိုးမဲသုတ် ခွပ်ခိုင်းတဲ့ တပ်မတော်ကြီး | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« The one who could controls himself while in anger
“Peaceful” Burmese Buddhist Monks destroyingaMuslim mosque in Bago,Myanmar »
တို့ဗမာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသားတိုင်းပြည် ရဲ့အိမ်ကြက်ချင်း အိုးမဲသုတ် ခွပ်ခိုင်းတဲ့ တပ်မတော်ကြီး
“တို့ဗမာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသားတိုင်းပြည်” တဲ့။
“ဟိုက်- သွားပဟ၊ လွဲပဟ”လို့ အာမေဋိတ်ရတယ်။
တပ်မတော်သည် အမျိုးသားရေးကို ဘယ်တော့မှ သစ္စာမဖောက်လို့ ကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော်ကြီးရဲ့ ချီရာလမ်းတစ်လျှောက်မှာ –
အမျိုးသားရေးကို လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးနဲ့ရောကျိုပြီး
ကချင်နဲ့ စိတ်ဝမ်းကွဲအောင်၊ …
အစ္စလာမ်နဲ့ စိတ်ဝမ်းကွဲအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ သွေးခွဲဇာတ်။
အဆန်းတကြယ် ကိစ္စမို့ အရေးတယူ လုပ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။
အာဏာရှင်ဆိုတာ အာဏာရှင်အလုပ်ကို လုပ်တာပါပဲ။
အာဏာရှင်ဆိုတာ ပြည်သူကို သွေးခွဲအုပ်ချုပ်တဲ့ အလုပ်ကိုပဲ လုပ်တာပါပဲ။
အဲသလိုနဲ့ ရေဒီယိုနဲ့ တီဗွီ အစီအစဉ်ကနေ နိစ္စဓူဝ မကြားချင်မှ အဆုံး မြည်မြည်နေတဲ့ “တို့ဗမာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသားတိုင်းပြည်”ဆိုတဲ့ ဟာကြီးက –
မရှိရင် ထမင်းကြမ်းခဲ ယပ်ခပ်စားပြီး အေးအေးလူလူနေတတ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တချို့ကို သွေးကြွစေခဲ့တယ်။
လူမျိုးရေးအစွန်းရောက် ဗမာတွေ ပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်။
အဲသလိုနဲ့ တို့ဗမာအကြမ်းဖက်သမားတွေ အုပ်စုဖွဲ့ အုံကြွလာတယ်။
မိသားစု လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ မျိုးနွယ်စု လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ လူမျိုးတူ လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ ဘာသာတူ လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ ဒေသတူ လူ့အဖွဲ့အစည်းစတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း အဆင့်ဆင့်ကို ခြုံဝန်းသိမ်းပိုက်နားလည်သွားတဲ့အခါ “ဟာ- လူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာ လူတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာပါလား”လို့ ရိုးရိုးလေး ကလေးစကားကို ဆိုဖြစ်ရတယ်။
“လူဆိုတာ တစ်ယောက်ဆီ မနေနိုင်တဲ့ သတ္တ၀ါတွေပဲလို့ ဆိုစမှတ်ရှိခဲ့တယ်” ဆိုတဲ့ သီချင်းစာသားကို အမှတ်ရတယ်။ “ဟာ-အဟုတ်ပါလား” လို့ အညာလေနဲ့ မှတ်ချက်ချရတယ်။
“တို့ဗမာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသားတိုင်းပြည်” တဲ့။ “ဟိုက်- သွားပဟ၊ လွဲပဟ”လို့ အာမေဋိတ်ရတယ်။ အဲဒါ တပ်မတော်သီချင်း။ တပ်မတော်သည် အမျိုးသားရေးကို ဘယ်တော့မှ သစ္စာမဖောက်လို့ ကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော်ကြီးရဲ့ ချီရာလမ်းတစ်လျှောက်မှာ အမျိုးသားရေးကို လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးနဲ့ရောကျိုပြီး ကချင်နဲ့ စိတ်ဝမ်းကွဲအောင်၊ ကရင်နဲ့ စိတ်ဝမ်းကွဲအောင်၊ ခရစ်ယာန်နဲ့ စိတ်ဝမ်းကွဲအောင်၊ အစ္စလာမ်နဲ့ စိတ်ဝမ်းကွဲအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ သွေးခွဲဇာတ်။ အဆန်းတကြယ် ကိစ္စမို့ အရေးတယူ လုပ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ အာဏာရှင်ဆိုတာ အာဏာရှင်အလုပ်ကို လုပ်တာပါပဲ။ အာဏာရှင်ဆိုတာ ပြည်သူကို သွေးခွဲအုပ်ချုပ်တဲ့ အလုပ်ကိုပဲ လုပ်တာပါပဲ။ အဲသလိုနဲ့ ရေဒီယိုနဲ့ တီဗွီ အစီအစဉ်ကနေ နိစ္စဓူဝ မကြားချင်မှ အဆုံး မြည်မြည်နေတဲ့ “တို့ဗမာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသားတိုင်းပြည်”ဆိုတဲ့ ဟာကြီးက မရှိရင် ထမင်းကြမ်းခဲ ယပ်ခပ်စားပြီး အေးအေးလူလူနေတတ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တချို့ကို သွေးကြွစေခဲ့တယ်။ ဘာသာရေး အစွန်းရောက်စေခဲ့တယ်။ လူမျိုးရေးအစွန်းရောက် ဗမာတွေ ပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်။ အဲသလိုနဲ့ တို့ဗမာအကြမ်းဖက်သမားတွေ အုပ်စုဖွဲ့ အုံကြွလာတယ်။
“ဟိုကောင်တွေ မူဆလင်တွေ တို့နိုင်ငံမှာ လာနေပြီး ကြီးပွားနေလိုက်တာ၊ တွေ့လား။ တို့ဗမာကျတော့ အိပ်ရာထရင် ထမင်းကြမ်းနဲ့ ထညက်ခဲ။ သူတို့ကတော့ သူတို့လူမျိုး ၇၈၆ ဆိုင်မှာ လက်ဖက်ရည်နဲ့၊ ပလာတာနဲ့၊ စမူဆာနဲ့၊ အီကြာကွေးနဲ့၊ လက်တစ်ဖက်မှာ စီးကရက်နဲ့၊ လက်တစ်ဖက်မှာ ဆယ်လူလာနဲ့ “တောက်” “ကွာ”စတဲ့ အသံတွေ တို့ဗမာ ခံတွင်းပျက်လာတယ်။ လူနဲ့လူချင်း အခွင့်တူရုန်းကန်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုတာကို သိဖို့ တို့ဗမာ ဦးနှောက်သေသွားခဲ့တယ်။ တို့ဗမာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသားတိုင်းပြည်ဆိုတဲ့ အသံပဲ တို့ဗမာသွေးထဲ မြည်နေခဲ့တယ်။
အနော်ရထာအရင်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ တို့ဗမာ ဘယ်ဘာသာကိုးကွယ်ခဲ့တာလဲ ဆိုတာကို တို့ဗမာ, မှန်းမသိတော့ဘူး။
အနော်ရထာတို့ ကျန်စစ်သားတို့ ဗန္ဓုလတို့ သူတို့အရင်က ပိတ်သုံမင်းတို့ဆိုတာလဲ တို့ဗမာ ဗုဒ္ဓဘာသာ မိဘနှစ်ပါးက မွေးခဲ့တာပဲလို့ တို့ဗမာရောချတတ်သွားတယ်။
ဗျတ်ဝိ၊ ဗျတ္တ၊ ရွှေဖျင်းညီနောင်ဆိုတာ နတ်တွေပေါ့။ တို့ကိုးကွယ်တော့ သူတို့လဲ တို့ဗမာပဲပေါ့လို့ တို့ဗမာမြင်လာခဲ့တယ်။
မင်းနှစ်ပါးအရာကျလို့ သူ့ကျွန်ဘ၀ရောက်ရတာ။ သူ့ကျွန်မခံတော်လှန်ခဲ့တာ။ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာ တို့ဗမာ တို့ဗမာလို့ အထင်ရောက်လာတယ်။ မင်းနှစ်ပါးအရာမကျခင် အရင်ကတည်းက ဒီမြေဟာ တို့ဗမာချည်း နေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို တို့ဗမာ အသိအမှတ်ပြုဖို့ ခက်လာတယ်။
မင်းတုန်းမင်းလက်ထက်တော် ကတည်းက မန္တလေးနန်းတွင်းထဲ မူဆလင်ဗလီရှိခဲ့တာ တို့ဗမာ အသိအမှတ်မပြုချင်တော့ဘူး။
အနော်ရထာ အရင်က ဗမာနိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကလွဲလို့ တစ်ခြားဘာသာတွေ စောပြီးရှိနေခဲ့တာ တို့ဗမာ အမှတ်မရဘူး။
အမျိုးသား အာဇာနည် ကိုးဦးထဲမှာ မူဆလင်နှစ်ယောက်ပါနေတာကို တို့ဗမာ စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်တတ် လာတယ်။
အဲဒီအာဇာနည်ခေါင်းဆောင် မူဆလင်ကုလားကြီးဦးရာဇတ်က မျိုးချစ်စိတ်မွေးပေးလို့ သခင်ဗဟိန်း ဖြစ်လာတယ်။ လူထုဒေါ်အမာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာ တို့ဗမာ အခံရခက်လာတယ်။
“တပ်မတော်ကြီးလည်း ချီလာပါပြီ။ အောင်တပ်မတော်ကြီးလည်း ချီလာပါပြီ”တဲ့။
အိမ်ကြက်ချင်း အိုးမဲသုတ် ခွပ်ခိုင်းပြီး ဒိုင်လုပ်စားဖို့ ချီလာတဲ့ တပ်မတော်ကြီးက ပြောတဲ့ “တို့ဗမာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသားတိုင်းပြည်” ဆိုတာကြီးကို အဟုတ်အဟတ်မှတ်လို့
တောင်ငူက မူဆလင်တွေကို တို့ဗမာ ၀င်ရိုက်ပစ်တယ်။ သူတို့အိမ် တွေ ဈေးဆိုင်တွေကို အကြမ်းဖက်ဖျက်ဆီးတယ်။ ဗလီတွေကိုပါ ဖျက်တယ်။
ကျောက်ဆည်က မူဆလင်မိသားစုကို အိမ်ပိတ်ပြီး အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်တယ်။ ဗလီဖျက်တယ်။
အဲသလိုနဲ့ တို့ဗမာအကြမ်းဖက် အဖွဲ့အစည်းကြီး အင်အားတိုးချဲ့နိုင်ခဲ့တယ်။
စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ပြဋ္ဌာန်းပြီး ဂွတ်ဂါးဗားမင့်၊ ကလင်းဂါးဗားမင့် ဘာညာ သမ္မတသစ်ကို အော်ခိုင်းထားပြီး တို့ဗမာ အကြမ်းဖက်သမားတွေ ချီတက်ဆဲပဲ။ ဘာကြာသေးလဲ။
၂၀၁၂ သင်္ကြန်ဝန်းကျင်။ ဖားကန့်ဒေသ ဆိပ်မူ ကျေးရွာဗလီကို ညကြီးမင်းကြီး မီးဆလိုက်တွေထိုးပြီးတော့ တို့ဗမာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့က တို့ဗမာဘုန်းတော်ကြီးကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြီး ဖျက်ပစ်တယ်။ မြေကွက်လပ်ကျန်တဲ့အထိ။ ပြီးတော့
မကွေး၊ ကံမက စီးပွားရေးကောင်းနေတဲ့ မူဆလင်သူဌေးတွေကို ၀င်ရိုက်တယ်။ သူတို့ အိမ်တွေ၊ ဈေးဆိုင်တွေတင်မကဘူး။ သူတို့ဗလီကိုပါ ဖျက်တယ်။ ဘာဖြစ်သေးလဲ။
တို့ဗမာအကြမ်းဖက်တာ အကြမ်းဖက်မှုမမြောက်ဘူး။ ရဲစခန်းရှိတယ်။ မဟန့်တားဘူး။
မိုးပေါ်ကိုထောင်မပစ်တတ်တဲ့ စစ်တပ်ရဲ့ သေနတ်ပြောင်းက တို့ဗမာ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဘက် ဘယ်တုန်းကမှ လှည့်ခဲ့တာ မရှိသလို နောင်လှည့်ဖို့ရာလည်း မရှိဘူး။
တို့ကို သူသင်ပေးတယ်။ တို့ရင်ထဲ ဒီလိုပဲစွဲတယ်။ တို့ဗမာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသားတိုင်းပြည် တို့ဗမာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသားတိုင်းပြည် တို့ဗမာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသားတိုင်းပြည် တို့ပြည် မိသားစု လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ကနေ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျုိးသားလူ့အဖွဲ့အစည်းအထ်ိ အဆင့်ဆင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကို စုပြီး စည်းပေးမှသာ အမျိုးသားနိုင်ငံရေး တည်ဆောက်ရာရောက်မှာပါ
ဟဲလို ဂွတ်ဂါးဗားမင့်။ – ဟဲလို … . ဟဲလို …. ဟဲလို ဂွတ်ဂါးဗားမင့်။
ဟဲလို . . .။
လူကြီးမင်း…. ခေါ်….ဆို….. သော …… ဖုန်း………မှာ ……ဆ…က်….သွ..ယ်…မှု……..ဧ….ရိ…..ယာ…..ပြင်…….ပ…. ။
This entry was posted on May 14, 2012 at 6:51 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “တို့ဗမာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသားတိုင်းပြည် ရဲ့အိမ်ကြက်ချင်း အိုးမဲသုတ် ခွပ်ခိုင်းတဲ့ တပ်မတော်ကြီး”
May 14, 2012 at 9:46 am | Reply
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း အစိုးရထိုးစစ်တွေကို အမြန်ဆုံးရပ်ဆိုင်းဖို့နဲ့ မရပ်ဆိုင်းဘဲ ဆက်လက်တိုက်ခိုက် နေမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းအနေနဲ့​ မြန်မာအစိုးရအပေါ် အရေးယူဒဏ်ခတ်မှုတွေကို ဆိုင်းငံ့ တာမျိုးမလုပ်ဘဲ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ဖို့ ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC က ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ UNFC ဟာ မေလ (၈) ရက်ကနေ (၉) ရက်နေ့အထိ ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင်အဖွဲ့ အစည်းဝေးခေါ်ခဲ့ပြိး အဲဒီအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ မေလ (၁၀) ရက်နေ့မှာ ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ လွှတ်တော်တက်နေတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ဒီမိုကရက်တစ်အမတ် တွေ၊ တိုင်းရင်းသားအမတ်တွေအနေနဲ့လည်း​ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း အစိုးရရဲ့ထိုးစစ်တွေ ရပ်ဆိုင်းရေးကို ၀ိုင်း ၀န်းဆွေးနွေးကြဖို့ UNFC ကြေငြာချက်မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။